Semalt: तपाईंको SEO प्रदर्शन विश्लेषण गर्ने तरिकाहरू
२ किन तपाइँको एसईओ प्रदर्शन पहिलो स्थान मा विश्लेषण?
3 तपाइँको एसईओ प्रदर्शन को विश्लेषण
। गुगल वेबमास्टरहरू
।। पृष्ठ गति
गुगल शीर्षमा उच्च श्रेणीकरण गर्न चाहनुहुन्छ? तपाइँको वेबसाइट मा अधिक यातायात ड्राइव गर्न चाहानुहुन्छ? तपाइँको व्यवसाय को समग्र सफलता बाधा बढाउन चाहानुहुन्छ? एक SEO विश्लेषण मात्र तपाईलाई चाहिने चीज हुन सक्छ। जम्मा गरिएको जानकारीले तपाइँको वेबसाइटको खोजी ईन्जिनमा स्तर सुधार गर्न रणनीतिक निर्णय लिन मद्दत पुर्‍याउँछ, तपाइँको साइटमा अधिक यातायात र अधिक चलाउन सक्छ।
Semalt सँग प्रभावकारी बजार अनुगमनको लागि एक शक्तिशाली वेबसाइट विश्लेषक उपकरण छ; तपाईंको वेबसाइटको स्थिति ट्र्याकिंग र तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको; र तीनिहरू तपाईलाई एक विस्तृत विश्लेषणात्मक व्यापार रिपोर्ट पनि पुर्‍याउँछन्।
किन तपाइँको एसईओ प्रदर्शन पहिलो स्थान मा विश्लेषण ?
१. तपाइँको वेबसाइट स्थितिहरू निगरानी गर्न: Semalt को साथ, तपाइँ कसरी अनलाइन बजारमा तपाइँको व्यवसायको लागि चीजहरू स्ट्याक राख्छन् भन्ने बारे पूरा तस्वीर सिर्जना गर्न अनुमति दिईन्छ। प्राप्त जानकारीको साथ, तपाईं तपाईंको भविष्यको काममा आवश्यक पोइन्टहरू हाइलाइट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
२. नयाँ बजारहरू पत्ता लगाउन: तपाईले आफ्नो सामानहरू र सेवाहरूको वितरणका लागि नयाँ अवसरहरू फेला पार्नुहुनेछ र विशेष समग्रमा तपाईंको समग्र ब्रान्ड विकास जुन तपाईंको व्यवसायको लागि क्षेत्र सम्बन्धित व्यापार रणनीतिहरू ट्रिगर गर्दछ।
Your . तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको स्थितिमा नजर राख्न: Semalt ले तपाइँको प्रतिस्पर्धीको बजार अवस्था सम्बन्धी सबै जानकारीको खुलासा गर्दछ। यो ज्ञानले तपाईंलाई प्रभावकारी रणनीतिहरू विकास गर्न मद्दत गर्दछ सधैं प्याकको अगाडि रहनको लागि किनकि तपाईंले ती चीजहरू पत्ता लगाउनुहुनेछ जुन तपाईं सही रणनीतिहरूको एरेमा समावेश गर्न सक्नुहुनेछ।
Your. तपाईंको विश्लेषणको प्रस्तुतीकरण गर्न: Semalt ले तपाईंलाई तपाईंको विश्लेषणको सेतो-लेबल रिपोर्टहरू बनाउने अनुपम अवसर दिन्छ जुन तपाईं सजिलैसँग तिनीहरूको साइटबाट पीडीएफ वा एक्सेल फर्म्याटमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो अत्यधिक आवश्यक छ जब तपाईं तपाईंको ग्राहकहरू वा तपाईंको टीमको लागि प्रस्तुतीकरणहरू आवश्यक छ।
तपाइँको एसईओ प्रदर्शन को विश्लेषण
तपाईको ड्यासबोर्डमा लग इन गरेपछि तपाईले मेनू आइकनमा बायाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाई एसईओ विश्लेषणका लागि विकल्पहरूको सूची देख्नुहुनेछ।
एकदम शीर्षमा, तपाईंसँग वेबसाइट विश्लेषण गर्न चाहानुभएको विकल्प छ। त्यसको मुनि तपाईसँग तपाईको ड्यासबोर्ड बटन छ जुन तपाई जुनसुकै बेला क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईलाई ड्यासबोर्डमा जान मन लाग्छ।
त्यसो भएपछि ड्यासबोर्ड बटनको तल, मुख्य Semalt विश्लेषण उपकरणहरू हुन् जुन sections खण्डहरू - SERP, सामग्री, गुगल वेबमास्टर्स र पृष्ठ गतिमा विभाजित हुन्छन्।
आउनुहोस् हामी कसरी यी सबै उपकरणहरू काम गर्दछन्। यहाँ नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं जहिले पनि रिपोर्ट प्राप्त गर्नुहोस् बटन रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
SERP सँग यसको अन्तर्गत sub वटा उप-शाखाहरू छन्:
a शीर्षमा कुञ्जी शब्दहरू : यहाँबाट प्राप्त भएको रिपोर्टले सबै कीवर्डहरू प्रदर्शन गर्दछ जुन तपाईंको साइटले गुगल कार्बनिक खोज परिणामहरूमा, क्रमबद्ध पृष्ठहरूमा, र उनीहरूको SERP स्थितिको लागि खास कीवर्डको लागि खोज्दछ। जब तपाईं 'TOP मा कुञ्जी शब्दहरू' मा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई पृष्ठमा लगिनेछ जहाँ तपाईं TOP मा कुञ्जी शब्दहरूको संख्या देख्न सक्नुहुन्छ, TOP द्वारा कुञ्जी वितरण र कुञ्जीशब्दहरू द्वारा क्रमबद्ध।
'कुञ्जी शब्दहरूको संख्या' एक चार्ट हो जुन समयको साथ Google TOP मा कुञ्जी शब्दहरूको संख्या देखाउँदछ। यो तपाइँको TOP 1-100 जैविक खोज परिणामहरूमा तपाइँको वेबसाइटको क्रमशः कुञ्जी शव्दहरूको संख्यामा परिवर्तन जाँच गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
'TOP द्वारा कुञ्जी वितरण' को साथ, तपाईले पहिलेको मिति बिरूद्ध सेट गरिएको गुगल TOP 1-100 जैविक खोज परिणामहरूको लागि तपाइँको वेबसाइटको श्रेणीहरूको कुञ्जी संख्याको सटीक संख्या फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
'कुञ्जीशब्दहरू द्वारा क्रमबद्धता' एक तालिका हो जुन तपाईंलाई सबैभन्दा लोकप्रिय कुञ्जी शव्दहरू देखाउँदछ जुन तपाईंको वेबसाइट पृष्ठहरू गुगल टेक कार्बनिक खोज परिणामहरूको लागि क्रमबद्ध गर्दछ। तालिकाले तपाईंलाई तिनीहरूका SERP स्थानहरू पनि चयनित मितिहरू र परिवर्तनहरू देखाउँदछ जुन अघिल्लो मिति बिरूद्ध सेट भयो। जब तपाईं 'समूहहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्' बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईं कुञ्जी शब्दहरूको नयाँ समूह सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, अवस्थितहरू प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईं तलको 'कीवर्ड्स द्वारा क्रमबद्धता' तालिकाबाट कुञ्जी शब्दहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई तपाईंको समूहमा जोड्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाई यो विषय, यूआरएल, आदि द्वारा तपाइँको वेबसाइटको प्रगति निगरानी गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
Semalt ले तपाईंलाई फरक प्यारामिटरहरू द्वारा टेबलमा डाटा फिल्टर गर्ने अवसर दिन्छ - एक कुञ्जी शब्द वा यसको अंश, URL वा यसको अंश, गुगल TOP 1-100 र स्थिति परिवर्तनहरू।
b उत्तम पृष्ठहरू: जब तपाइँ 'सर्वश्रेष्ठ पृष्ठहरू' मा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको साइटमा पृष्ठहरू देखाइनेछ जुन जैविक ट्राफिकको अधिकतम संख्यामा ल्याउँदछ। तपाईंले यसलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्दछ, अन-पृष्ठ एसइओ त्रुटिहरू खोज्दै, यी त्रुटिहरू ठीक गर्दै, अनौंठो सामग्री थप्नका साथै यी पृष्ठहरूलाई गुगलबाट अधिक ट्राफिक उत्पादनको लागि प्रमोट गर्दै।
'समयको साथ उत्तम पृष्ठहरू' एक चार्ट हो जुन TOP मा तपाईंको वेबसाइट पृष्ठहरूको संख्या परिवर्तनमा प्रर्दशन गर्दछ तपाईंको प्रोजेक्टको स्थापना भएदेखि। तपाईं मापन प्रति हप्ता वा मासिक डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईं मापन स्विच गर्नुहुन्छ।
'समय भन्दा बढि पृष्ठहरू' मुनि, तपाईंसँग 'भिन्नता' उपकरण छ जसले तपाईंलाई गुगल TOP 1-100 जैविक खोजी परिणामहरूमा अघिल्लो मिति विरूद्ध सेट गरिएको वेबसाइटहरूको संख्या फेला पार्न मद्दत गर्दछ। तपाईं मापन गर्न सक्नुहुन्छ स्विच प्रति हप्ता वा प्रति महिना भिन्नता जाँच गर्नका लागि। तपाईंसँग संख्यात्मक वा रेखाचित्र ढाँचामा भिन्नता हेर्न विकल्प पनि छ।
त्यहाँ एक चार्ट पनि छनौट गरिएको पृष्ठहरू कुञ्जीशब्द तथ्या .्क हो जुन चयनित पृष्ठहरू प्रोजेक्टको शुरूदेखि नै Google TOP मा रैंकिंग गरिएको कीवर्डहरूको संख्यामा परिवर्तन देखाउँदछ।
अन्तिममा, हामीसँग 'TOP मा पृष्ठहरू' छन्, जुन तालिकाले कुञ्जी शब्दहरूको संख्या देखाउँदछ जुन Google पृष्ठमा चयन गरिएको मितिहरूको लागि निर्दिष्ट गरिएको छ। तपाईं पनि एक URL वा यसको अंश द्वारा सबै भन्दा राम्रो पृष्ठहरू फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको वेबसाइटमा पृष्ठहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन TOP 1-100 श्रेणीकरणमा छ।
c प्रतिस्पर्धीहरू: यो त्यहि हो जहाँ तपाइँले सबै वेबसाइटहरू भेट्टाउनुहुनेछ जुन शीर्ष १०० मा क्रमशः समान कुञ्जी शब्दहरूको लागि तपाइँको वेबसाइटको लागि क्रमबद्ध हुन्छ। तपाइँ पनी देख्नुहुनेछ जहाँ तपाइँ तपाइँको प्रतिद्वन्द्वी बीच खडा हुनुहुन्छ TOP 1-100 मा सबै कुञ्जी शव्दहरूको संख्या द्वारा।
यस पृष्ठमा तपाईले साझा गरिएको कुञ्जी शव्दहरू प्रदर्शन गर्ने ब्लकहरूको सेट भेट्टाउनुहुनेछ जुन तपाईंको साइट र तपाईंको शीर्ष 500०० प्रतिद्वन्द्वी Google SERP मा रेन्क हुन्छ।
अर्को, तपाइँले 'साझा कुञ्जीशब्द डाईनामिक्स' फेला पार्नुभयो जुन एक चार्ट हो जुन साझा कीवर्डहरूको संख्या परिवर्तनहरू देखाउँदछ जसको लागि विशिष्ट प्रतिस्पर्धीहरू तपाईंले हाइलाइट गर्नुभएको शीर्षमा क्रमबद्ध गरिएको छ।
तल तपाईले 'गुगल टपमा प्रतिस्पर्धा' देख्नुहुनेछ जुन तालिका हो कि साझा कीवर्डहरूको स reve्ख्या दर्साउँदछ जुन तपाईं र तपाईंको प्रतिस्पर्धीको वेबसाइटको शीर्षमा शीर्ष श्रेणी छ। Semalt ले तपाईंलाई अघिल्लो मिति बिरूद्ध साझेदारी कीवर्ड संख्यामा भिन्नता अध्ययन गर्न विकल्प दिन्छ। तपाइँ तपाइँको प्रतिद्वन्द्वी वेबसाइटहरूको पूर्ण फिल्टर वा यसको एक अंश प्रयोग गरेर पनि फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँले सूचीलाई केवल स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटहरू जुन माथि १-११०० प्रविष्ट गरिएको छ।
सामग्री सेक्सन अन्तर्गत, तपाईं 'पृष्ठ विशिष्टता जाँच' उपकरण देख्नुहुनेछ जुन क्लिक पछि तपाईंलाई यसको आफ्नै पृष्ठमा लैजान्छ। यो जहाँ तपाईं पाउनुहुनेछ गुगलले तपाईंको वेबपृष्ठ अनौंठो वा हैन भने। तपाईंले नोट गर्नु पर्दछ कि यदि तपाईं आफ्नो वेबपृष्ठ सामग्रीको विशिष्टताको बारेमा डबल पक्का हुनुहुन्छ भने, यो सम्भव छ कि यो अर्को व्यक्ति द्वारा प्रतिलिपि गरिएको हुन सक्छ। र यदि ती व्यक्तिले तपाईंको सामग्रीलाई तपाईंको अगाडि अनुक्रमणिका गर्छ भने, गुगलले तिनीहरूलाई प्राथमिक स्रोतको रूपमा मान्यता दिनेछ जब तपाईंको सामग्री चोरी गरीनेछ। तपाईं गुगललाई दण्ड दिन चाहनुहुन्न किनकि गुगलले तपाईंलाई दण्ड दिन्छ यदि तपाईंसँग आफ्नो वेबसाइटमा चोरी सामग्री छ भने।
Semalt ले तपाईंलाई एक विशिष्ट प्रतिशत स्कोर दिन्छ तपाईंको वेबसाइट सामग्री गुगलको आँखामा कसरी गरिरहेको छ भनेर थाहा दिन। ०-50०% स्कोरले तपाईंलाई भन्दछ कि गुगलले तपाईंको सामग्री चोरी गर्दछ र यस प्रकारको वेबपृष्ठको लागि स्थिति वृद्धिको कुनै सम्भावना हुँदैन। Semalt ले तपाईंलाई राम्रो स्कोर दिनको लागि तपाईंको हालको सामग्रीलाई अद्वितीयको साथ बदल्न मद्दत गर्दछ।
-१-80०% मा, Google ले तपाइँको सामग्रीलाई उत्तम रूपमा पुनःलेखनको रूपमा लिन्छ। तपाईको वेबपेजको वेबपृष्ठ स्थिति वृद्धिमा स्लिम मौका छ। तर किन औसतको लागि समाधान गर्नुहोस् जब Semalt ले तपाईंलाई सर्वश्रेष्ठ दिन सक्छ?
-1१-११०% मा, Google ले तपाईंको पृष्ठलाई अनौंठो मान्दछ र तपाईंको वेबपृष्ठ स्थिति सम्भवतः गुगल SERP मा अनहिडर हुनुहुनेछ।
तपाईंले सबै पाठ सामग्रीको सूची फेला पार्नुहुनेछ जुन गुगलबटले विशेष वेबपृष्ठमा प्रश्नमा देख्दछ (Semalt ले तपाईंलाई वेबपृष्ठ सामग्रीको नक्कल भाग हाइलाइट गर्न पनि मद्दत गर्दछ)।
साथै, तपाईंले एउटा मूल भेट्टाउनुहुनेछ 'मूल सामग्री स्रोत'। यो वेबसाइटहरूको सूची हो जुन गुगलले तपाईंको वेबपृष्ठ सामग्रीको प्राथमिक स्रोतहरू विचार गर्दछ। यहाँ तपाईं पक्कै थाहा सक्नुहुनेछ कि तपाईंको पृष्ठ सामग्रीको कुन हिस्सा ती वेबसाइटहरूमा फेला पर्‍यो।
यो एक सेवा हो जसले तपाईंलाई तपाइँको वेबसाइट अनुक्रमणिका मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने क्रममा Google कार्बनिक खोज परिणामहरूमा कसरी प्रदर्शित हुन्छ भनेर देखाउँदछ। यसको अन्तर्गत, तपाईंले अवलोकन, प्रदर्शन र साइटम्यापहरू फेला पार्नुहुनेछ।
a सिंहावलोकन: सिंहावलोकन खण्डमा, तपाईं पेश गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको वेबसाइट प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईका URL हरू लाई Google अनुक्रमणिकामा थप्न सक्नुहुन्छ।
b प्रदर्शन: यहाँ प्राप्त डाटा तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को प्रभावकारिता बताउँछ। तपाईले डाटालाई तुलना गर्न सक्नुहुन्छ विशिष्ट मिति / समय अवधिको लागि। यसले तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइटको शक्ति पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ र साथै प्रत्येक त्रुटि TOP मा तपाइँको रैंकिंग लाई प्रभावित गर्दछ।
c साइटम्यापहरू: यो जहाँ तपाईं गुगलमा आफ्नो वेबसाइट को साइटम्याप सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ कि कुन साइटम्यापलाई अनुक्रमित गरिएको छ र जसमा त्रुटिहरू छन्।
'सबमिट गरिएको साइटम्याप' तालिका अन्तर्गत, तपाईं गुगल खोजी कन्सोलमा पेश गर्नुभएको साइटम्यापहरूको संख्या हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईं तिनीहरूको स्थिति जाँच गर्न सक्नुहुनेछ र साथै तिनीहरूको समावेश युआरएलहरूको संख्या पनि।
'पृष्ठ गति विश्लेषक' उपकरण तपाईको पृष्ठ लोड समय Google मापदण्ड पूरा गर्छ कि भनेर निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले त्रुटिहरू पहिचान गर्दछ जुन फिक्सिंग आवश्यक पर्दछ र सही सुधार सुझावहरू दिन्छ जुन तपाईं आफ्नो वेबपेजको लोड समय सुधार गर्नका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यो दुबै डेस्कटप र मोबाइल ब्राउजरहरूको लागि औसत लोड समय अनुकरण गर्दछ।
तपाईको एसईओ प्रदर्शनको विश्लेषणको महत्त्वलाई कसैले बुझ्न सक्दैन र यो लेखबाट तपाई यो देख्न सक्नुहुनेछ कि यो कसरी उत्तम तरिकाले गरिन्छ - Semalt तरीका।